Nomu S30 Mini oo sanduuqii ugu horreeyay aan furin [fiidiyow] | Androidsis
Maalmo ka hor ayaan kulahadalnay barnaamijka 'Androidsis' ee ku saabsan soo bandhigida NOMU S30 Mini, casriga ku saleysan Android iyo gaar ahaan loogu talagalay kuwa ugu geesinimada badan uguna xiisaha badan maxaa yeelay waa terminal aad u adkeysi badan.
Hagaag, waxa aan maanta kuu keenayno ayaa ah markii ugu horreysay ee fekerka NOMU S30 Mini ee fiidiyoowga ah, mahadsanid taas oo aad ka arki karto taleefankan oo dhan quruxdiisa oo aad ku qanacsan tahay dhammaan astaamaheeda iyo qaabeyntiisa. Intaas waxaa sii dheer, fiidiyowgaan waxaad ka arki kartaa a muujinta astaamaha ugu muhiimsan iyo sidoo kale imtixaanadii ugu horreeyay ee benchmark.
Nomu S30 Mini, taleefanka dhulka oo dhan ah
Nomu S30 Mini waa taleefan casri ah oo aad uga duwan wixii aan u baran jirnay inaan aragno. Waa terminal is haysta oo anfacaya, laakiin sidoo kale aad u adkaysta xaaladaha xun ee dibada.
Waxay leedahay shaashad ah 4,7 inches ilaaliyo Ku xidhashada Gorrilla Glass 3, 6737 GHz afar-geesle processor MediaTek MT1.5T oo ay weheliyaan 3 GB oo RAM ah iyo 32 GB oo keyd ah gudaha iyo farabadan dareemayaal: Accelerometer, Gyroscope, Dareeraha iftiinka deegaanka, dareeraha cuf isjiidadka, dareeraha geomagnetic.
Iyada oo aad ku heli doontid sawirro wanaagsan meel kasta oo aad ku mahadsan tahay 8.0 megapixel kamarad weyn leh dareeraha 'Sony IMX219' iyo diiradda tooska ah, oo ay weheliso kamaraddeeda hore ee 2 megapixel.
Kuwan kale astaamaha ugu muhiimsan isagaa leh Shahaadada IP68 ee boodhka iyo caabbinta biyahauu 3.000 Mah batari, marka lagu daro bixinta Bluetooth 4.0, GPS, laba SIM iyo Android 7.0 Nougat.
Fiidiyowga soo socda waxaad ku arki doontaa Nomu S30 Mini cusub oo faahfaahsan sidoo kale waxaad awoodi doontaa inaad hubiso tijaabooyinkeeda ugu horreeya ee qaar ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee imtixaanka geliya.
Hadana haddii aad jeceshahay Nomu S30 Mini-ka cusub, ha iloobin taas Halkan waad awoodi kartaa ku hel qiimo dhimis qaas ah oo toban doolar ah. Marka yaanay kaa bixin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Fariintii ugu horreysay ee Nomu S30 Mini [fiidiyow]
Moodooyinka cusubi sidoo kale ma qaadaan fayrasyo ​​sida kuwii hore oo kale? https://actualidad.rt.com/actualidad/246047-encontrar-virus-smartphones-chinos
NOMU waxay soo saartaa taleefanno casri ah oo tayo sare leh
Noo soo jawaab